Guoxin History - Hangzhou Jinding Aluminum Co., Ltd
Aluminum firaka Ingot Processing Fitaovana
Aluminium Casting Lafaoro
Aluminum Machining, Quenching, Annealing Fitaovana
1000 Series Aluminum firaka
2000 Series Aluminum firaka
3000 Series Aluminum firaka
4000 Series Aluminum firaka
5000 Series Aluminum firaka
6000 Series Aluminum firaka
7000 Series Aluminum firaka
Tamin'ny Aprily 2006
Qinghai Guoxin Aluminum Industry Company dia naorina, ny tahiry ho an'ny tena orinasa fanaovana fantsona aluminium firaka, aluminium firaka hazo sy ny mombamomba aluminium firaka. Ao amin 'ny volana, ny Qinghai Antoko Komonista Shinoa Provincial Sekretera Komity, ny governora lefitra, ary ny ben'ny tanàna ny Xijing tonga ny fisafoana.
Tamin'ny Septambra 2007
ny orinasa nanomboka vorio ny 36MN extrusion gazety.
Tamin'ny volana Oktobra 2007
ny 2100USTon, 2600USTon extrusion milina fanontam-pirinty teo amin'ny fandrosoan'ny fiangonana. Mandritra izany fotoana izany, dia hanao fivoriana ho an'ny fifanakalozana teknolojia momba ny 55MN, 28MN aluminium extrusion tetikasa.
Tamin'ny Janoary 2008
ny 36MN, 2600Uston, 2100USTon aluminium extrusion milina famokarana tao anatiny.
Tamin'ny faha-12 May, 2008
Ny orinasa efa lasa ny ISO9001: 2000 fanamarinana.
Tamin'ny Septambra 2008
hazonintsika lanonam-panokafana mitondra tena ho toy ny kilasy faharoa tsiambaratelo fahaizana Company.
Tamin'ny Novambra 2008
izahay nampahafantatra ny 28MN-droa hetsika mivantana extrusion milina avy amin'ny SMS Siemag.
Tamin'ny Desambra 2009
ny orinasa nanana fitsapana misesy ny 100MN roa-hetsika mivantana extrusion milina, izay extruded lehibe-savaivony aluminium firaka fantsona ho an'ny mpanjifa.
Tamin'ny Janoary 2010
ny orinasa efa namoaka Φ460x111mm lavaka fanariana ingots vita amin'ny aluminium 6005A firaka, ary 2A12 aluminium firaka voalohany.
Tamin'ny faha-18 May, 2010
Ny orinasa efa nanao Φ178mm 2A12 aluminium firaka fanariana hazo, raha manao izany no efa naharesy izao sarotra ny fanariana 2000 andian-dahatsoratra aluminium firaka.
Tamin'ny faha-20 Febroary, 2011
Ny orinasa efa nanao Φ260x83mm 6A02 aluminium firaka lavaka fanariana ingots soa aman-tsara.
Tamin'ny Aprily 2011
Guoxin efa nandresy zava-tsarotra ao amin'ny orinasa mpamokatra entana ny 7049-T6511 aluminium firaka fantsona amin'ny diameters ny Φ136x127x4.5mm.
Tamin'ny 25 Aprily 2011
Guoxin nanana ny mpitari-draharaha vaovao sy ny Tale Jeneraly, Nan Haihao.
Tamin'ny May 2011
Guoxin efa mandresy zava-tsarotra ny eo amin'ny fanaovana 7A04-T6 aluminium firaka mombamomba amin'ny diameters ny GXC7081 108x70mm.
Tamin'ny 25 Novambra, 2011
Guoxin orinasa efa lasa ny ISO9001: 2008 fanamarinana.
Tamin'ny volana Aprily, 2012
Guoxin orinasa efa namoaka Φ456x192mm lavaka fanariana ingots vita amin'ny aluminium andiany 2000 firaka, 5000 andian-dahatsoratra aluminium firaka na andian-dahatsoratra 6000 aluminium firaka. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa dia nanao Φ210x5mm 5052-aluminium O firaka fantsona, karazana lehibe-savaivony miray volo manify-rindrina fantsona.
Tamin'ny faha-15 May, 2012
ny orinasa nampiasa 100MN hetsika roa-extrusion milina fanaovana Φ360x340x10 habeny lehibe miray volo 6082 aluminium firaka fantsona.
Tamin'ny 4 Jona, 2012
Guoxin orinasa efa niezaka hamokatra Φ46 7A04 aluminium firaka hazo mihidy soa aman-tsara.
Tamin'ny faha-13 Septambra, 2012
Guoxin orinasa efa nanao Φ605mmx350mm 6061 sy 5083 aluminium firaka aluminium firaka lavaka fanariana ingots voalohany.
Tamin'ny 2 Novambra, 2012
Guoxin orinasa efa nanao 260x5mm 5052-aluminium O firaka fantsona ho an'ny soa aman-tsara ny fotoana, karazana rindrina manify-habeny lehibe miray volo sodina.
Tamin'ny faha-16 Septambra, 2013
Ao amin'ny Baihe fanariana atrikasa ny Guoxin, efa niezaka mpanamboatra φ178 6000 andian-dahatsoratra aluminium firaka fanariana tehina soa aman-tsara ho an'ny fotoana voalohany.
Tamin'ny 1 Aogositra, 2015
Guoxin mihazona ny varotra ara-drariny ho an'ny 2015 amin'ny aluminium firaka vokatra.
Guoxin orinasa Nasaina hanatrika ny 2 Shina International Aluminum Mandatsaka fihaonana.
Tamin'ny faha-23 Novambra 2015
Guoxin orinasa no lasa toy ny fandinihana ny orinasa miaraka amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana araka ny fitsipika miaramila.
Guoxin efa namoaka fahita firy Tany Zinc-Aluminium firaka 7055A aluminium firaka fanariana hazo amin'ny savaivony ny Φ229, ary koa ny firaka Manezioma fantsona, firaka trano fisotroana, ary ny firaka mombamomba.
Manamafy Orina ny teknolojia zava-baovao ny ...